Maxaa yeelay waxay umuuqataa inaad iskudayeyso! | Martech Zone
Maxaa yeelay waxay umuuqataa inaad iskudayeyso!
Jimcaha, Sebtember 22, 2006 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Haa! Haa! Haa! Sababtoo ahlooks sida aad isku dayeyso ", Seth ayuu qoray. Saaxiibkeyga qaaliga ah wuxuu ku maqanyahay dibedda magaalada kulan uu la yeelanayo urur ku saabsan mowqif fiican oo iyaga la jira. Waan murmay, tuugsaday, kana baryay inuu suudh xidho. Waa boos dacwadu ku habboon tahay oo buuxda mushaharka la bixiyo. Wax walba waan isku dayay… maya.
"Ma sameeyo suudis", ayuu yidhi.
"Waa inaad!", Waxaan dhihi.
"Waan weydiiyay waxayna dhaheen dhamaantood waxay xirtaan jiinis", ayuu yidhi.
“Markaa waa maxay !?”, ayaa yidhi aniga.
Suudh ma xidhnayn.
Hada la siiyay, waxay u badan tahay inuu heli doono dalabka. Shaki kama lihi kartidiisa cajiibka ah iyo shakhsiyaddiisa, waditaankiisa, iyo u-hureyntiisa. Waxaan dareemay gebi ahaanba 'dugsigii hore' anigoo u sheegaya inuu xirto suud. Isaga iyo anigu waxaan labadeenaba u shaqeeynaa shirkado labisan oo caadi ah. Had iyo jeer sidaas ma ahayn, waxaan u shaqeyn jiray shirkado aan maalin walba ku tuuri jiray xarig. Dhib malahan arintaas… waxay iga dhigeysaa inaan muhiim ahay. Way qabataa, waa inaan qiraa. 🙂
Anigu si fudud jawaab fiican ugama aanan helin markii aan sii waday isaga, laakiin waxaan hubaa in dacwad ay ka dhalan lahayd dalab ka fiican, ikhtiyaarro ka fiican, wax ka fiican! Waxaa laga yaabaa in si fudud ixtiraam dheeraad ah. Suudhku waa si fudud maalgashi naftaada. Xidho suudhka, soo qaado lacagta kaashka ah… ku rid qallajiye-nadiifiyeyaasha ilaa waqtiga xiga Waa maxay hoos u dhaca? Qofna kuma qoslo nin suudh xidhan. Laakiin waa laga yaabaa inay ku qoslaan ninka jiinis jooga.
Waagii hore, shaqsiyan go'aan ayaan ku gaadhay ma shaqaalayso dadka sababo la xiriira labbiska iyo nadaafaddooda. Waa nasiib darro… laakiin waan dhaafay iyaga inkasta oo ay karti badnaayeen. Sababta Marnaba kama fikirin taas ka hor, laakiin Seth wuxuu ku dhuftay madaxa… waa sababta oo ah ma aysan ahayn isku dayaya. Ninka (ama gal) ee dacwada ayaa ahaa isku dayaya. Waxay gashadeen sharaabaadyo qurxoon, kabaha dhalaalayay, waxay ku xireen Windsor 3 jeer, waxay xirteen biinanka lar jaakadana way xirteen 3 jeerna way xirteen si uusan u duubnayn. Xanuun badanaa! Laakiin way sameeyeen. Sababta Sababtoo ah way iskudayeen!
Taasi ma khalad baa? Miyaan gaboobayaa?
Waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo qormadan dhowr toddobaad ka hor si aan ugu jawaabo. Inta badan Seth wuxuu ka hadlayaa Balloons-ka Suuqgeynta ee Goobta Iibinta Gawaarida, suudh ayaa sameeya waxaad moodaa inaad iskudayeyso.
10 Soo-jeedinno lagu hagaajinayo Digg
Foomka Xiriirka WordPress oo leh Ilaalinta Spam
Sep 23, 2006 at 9: 44 AM
Waan ku raacsanahay gebi ahaanba Doug. Xitaa waxaan ku dari lahaa timo qurxan iyo kabo dhalaalaya isku dhafka. Aniga ahaan haddii aanu qofku daryeelayn ku filan si uu aragti fiican u yeesho. Maxaa kugu kalifaya inaad u maleyso inuu daryeeli doono in ku filan oo ku saabsan qabashada shaqadiisa si fiican ama daryeel ku filan oo ku saabsan shirkaddaada. Had iyo jeer maahan wax ku saabsan karti iyo maskax. Waxaa jira dad badan oo caqli badan. Runtii waxay ku saabsan tahay hammuun iyo wadid.
Sep 25, 2006 at 3: 58 PM
Sidoo kale ogolaada. Waxaan ku faani jiray waligey, waligay xiran suud (inaan ahaado kan kaliya maalinta qalin-jabinta, inaan magacaabo tusaale). Laakiin tan iyo markii aan bilaabay shirkad aniga ii gaar ah, isla markaana aan la yeeshay shirar badan oo macmiil ah, waxaan bartay (oo aan la aqbalin oo keliya) inay macno samaynayso labbiska. Waa hab lagu dhaho waad ka dhab tahay waxaad sameyneyso. Inaad ixtiraamto macmiilkaaga. Inaad ka fikirto waxaad qabanayso.
Kulamada dambe (ama kiiska saaxiibkaa), marwalba waad labisan kartaa. Laakiin waligaa wax aan caadi aheyn oo aad macmiil tahay!